यस्ता छन् काठमाडौंमा भर्खरै खुलेको पाँचतारे होटलका कोठा र सुविधा (तस्बिरहरू) :: सुनिता सिटौला :: Setopati
सञ्चालक गोल्यान भन्छन्- नयाँ होटल भन्दैमा अचाक्ली महँगो छैन
काठमाडौंको सोल्टीमोडमा खुलेको पाँचतारे होटल ह्यात प्लेसभित्र। तस्बिरः नवीनबाबु गुरुङ/सेतोपाटी
व्यापारिक घराना गोल्यान समूहले भर्खरै काठमाडौं, सोल्टीमोडमा पाँचतारे होटल ‘हायात प्लेस’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सञ्चालनपछि होटलले कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ? होटलको मुख्य विशेषता के हुन्? यसमा थप के सुविधा होलान्? भावी योजना के होलान्?
यी र यस्तै प्रश्नहरू हामीले गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानलाई गरेका छौं। प्रस्तुत छ गोल्यानसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पाँचतारे होटल हायात प्लेस भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ? कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ।
हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुई साता पनि भएको छैन। ग्राहकबाट राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ। कार्यक्रमहरूका लागि हलको बुकिङ पनि राम्रै भएको छ। केहीले विवाहका लागि पनि बुकिङ गरेका छन्।
कोठाहरूको चाहिँ त्यति बुकिङ आउन सकेका छैनन्। होटल नयाँ पनि छ। सबैलाई यसबारे थाहा पनि छैन। आउने ग्राहकले होटलको डिजाइनदेखि सर्भिस, खाना सबैमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
पवन गोल्यान। तस्बिरः नवीनबाबु गुरुङ/सेतोपाटी
होटलको मुख्य विशेषता के-के हो? अन्यभन्दा यहाँ के फरक छ? यो खासमा कस्तो होटल हो?
यो हायात होटल नै हो। मलाई लाग्छ होटल भन्नेबित्तिकै ग्राकलाई गेटबाट छिर्नासाथ आहा भन्ने भावना आउन पर्छ। यो होटलमा ग्राहकले यो भावना पाएका छन्। ग्राहकलाई होटलमा बस्ने भन्नेबित्तिकै खाना कस्तो हुन्छ, कोठा कस्तो छ, सर्भिस कस्तो दिने हो भन्ने खुलदुली हुन्छ। हायात प्लेसमा आउने ग्राहकलाई यो कुरामा ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु।
सफा कोठा, सेवा र गुणस्तरीय खानाले नै होटल चल्ने हो। हाम्रो सेवा र खाना दुवै राम्रो छ। हामीले कर्मचारीलाई राम्रो तालिम दिएका छौं। होटल नयाँ भएकाले कोठा त झनै राम्रो हुने नै भयो।
पाँचतारे होटल भए पनि हामीले सबैलाई लक्षित गरेर सर्वसुलभ मूल्य राखेका छौं। नयाँ होटल अचाक्ली महँगो होला भनेर ग्राहकले सोच्न पर्दैन।
होटलमा एक सय ५३ कोठा छन्। लक्जरी तथा बिजनेसमा वर्गीकरण गरी सबैलाई मिल्नेगरी कोठाहरूको इन्टेरियर डिजाइन गरिएको छ।
होटलका कोठाहरू पनि ठूल्ठूला उज्याला छन्। प्रायः सबै कोठाको बाहिर बरन्डा छ। जसले गर्दा ग्राहकले बाहिरको दृश्य हेर्दै चिया, खाजा खान सक्छन्।
पार्किङ सुविधाका लागि दुई तलाको बेसमेन्ट छ। यहाँ स्विमिङ पुल, स्पा, जिम, क्लब, ब्यांकेट हल, सात सय क्षमताका मिटिङ रूम छन्।
आज भोलि घरमा कुकुर, खरायो जस्ता जनावर पाल्ने चलन छ। जनावरलाई एक्लै छोड्न नमिलेर घरका सबै सदस्य एकैपटक घुम्न जान सक्दैनन्। त्यो भएर हामीले जनावरलाई पनि प्रवेश दिएका छौं। अन्य होटलमा जनावर छिर्न दिँदैनन्।
होटलमार्फत् कति रोजगारी सिर्जना भएको छ?
होटलमा अहिले एक सय ५० जना कर्मचारी छन्। पछि आवश्यकता अनुसार थप्छौं।
होटलका लक्षित ग्राहक को हुन्? त्यस्ता ग्राहक नेपालमा कति आउँछन् वा आऊलान् भन्ने अनुमान छ?
स्वदेशी–विदेशी दुवै हाम्रा ग्राहक हुन्। होटलका रूम विदेशी ग्राहकले चल्छन् भने, हल नेपाली ग्राहकले चल्ने हुन्।
हायात अमेरिकी ब्रान्ड भएकाले यहाँ जुनसुकै देशका ग्राहक आउन सक्छन्। विशेषगरी कोठामा बस्न छिमेकी मुलुक भारत र चीनकालाई बढी लक्षित गरेका छौं। कार्यक्रमहरूका लागि त नेपाली नै हुन्। त्यसमा हामीले कर्पोरेट, बिजनेस क्षेत्र र आम मानिसलाई समेटेका छौं।
होटल चलाउने अरू पनि कम्पनी छन्। हायात ब्रान्ड नै रोज्नुको कारण?
हायात अमेरिकी ब्रान्ड हो। यसले विश्वमै सफलता पाएको छ। त्यसैले हामीले पनि यसलाई नै रोजेका हौं। हामीले एउटै ब्रान्डलाई मात्रै लियौं भने प्रतिष्पर्धा हुँदैन। प्रतिष्पर्धा भएन भने गुणस्तर बढ्दैन।
अन्यको तुलनामा हायातको सर्भिस राम्रो छ। हामीले राम्रो सर्भिस दिन पनि हायात रोजेका हौं। यो सिस्टममा चल्ने ब्रान्ड हो। हामीले यो ब्रान्डलाई अरूको तुलनामा छिटोछिटो अपडेट भएको देखेका छौं।
तर हामीकहाँ त हायातको राम्रो छाप छैन नि, निकै समस्या आएको सुनिन्छ। यो परिस्थितिमा तपाईं कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
होटल चलाउने मालिकले होइन, कर्मचारीले हो। कर्मचारीलाई खुसी राख्नुपर्छ। हाम्रो गोल्यान समूहको विशेषता नै त्यही हो, हाम्रा कर्मचारीलाई खुसी राख्छौं। हाम्रोमा काम गर्न धेरैले अन्य कम्पनी छोडेर आउने गर्छन्। हामी कर्मचारीलाई कामदारको रूपमा नभइ लगानीकर्ताका रूपमा हेर्छौं।
हाम्रो समूहका कर्मचारीलाई हामीले आफूलाई केही समस्या भयो भने कम्पनी छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं। त्यो भएर हाम्रो होटलमा त्यस्तो समस्या आउँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु।
कोरोनाको असर अझै सकिएको छैन। हामीकहाँ पर्यटक आउने देशमा अहिले कोरोना फैलिएको छ। यस्तोमा होटल चल्छ भन्ने लाग्छ?
कोरोना त छ। तेस्रो भेरियन्ट पनि आउन सक्छ भनिरहेको छ। त्यसलाई त हामीले पनि रोक्न सक्दैनौं। धेरै चुनौती छ। काठमाडौंका होटल आन्तरिक पर्यटकले चल्दैनन्।
काठमाडौंका मान्छे सबै घुम्न बाहिर नै जाने हुन्। होटलको रूम बुकिङ हुन विदेशी आउनै पर्छ। महामारीले मान्छे घरमा थुनिएर बसेको दुई वर्ष भइसक्यो। मान्छेहरूलाई उकुस मुकुस भएको छ। अहिलेको अवस्थामा भारतको एयर-बबल हटाउन सक्यौं भने धरै पर्यटन आउन सक्छन्।
चीनको फ्लाइट सुरू गरियो भने यी दुई देशबाट धेरै पर्यटन आउने सम्भावना छ। पर्यटकलाई अनावश्यक दुःख नदिई सहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिने हो भने पर्यटक आउँदैनन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
हामी कोभिडकै चपेटामा छौं। त्यसैले पर्यटकलाई पिसिआर गराउन लगाउन पर्छ। एउटा खोप लगाउनेलाई दुइटा लगाउन भन्न सकिन्छ। तर यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनियो भने पर्यटक आउँदैनन्।
सोचेभन्दा बढी लगानीमा यो होटल बनेको छ? कहिलेसम्म नाफाउन्मुख होला?
समय र परिस्थितिले होटलको लागत बढेको छ। तर होटल दीर्घकालीन व्यवसाय हो। छिटो नाफा कमाउने मान्छे यसमा छिर्न पनि हुँदैन। नाफाका लागि आत्तिन पर्ने मैले केही देखेको छैन।
नाफा आउन समय लाग्छ। कोभिडबाट निस्किएको भए म सजिलै भनिदिन्थे कि यति वर्षभित्रमा होटलले नाफा कमाउन सुरू गर्छ भनेर, तर कोभिडमै छौं। यहाँका कार्यक्रमहरूले होटल सञ्चालनमा सहजता मात्रै गर्ने हो। कोठा बुकिङ सुरू नभई नाफामा जान सकिँदैन।
कोभिडकै चपेटामा भएकाले हामीले नाफामा जान दुई देखि पाँच वर्षको अनुमान लगाएका छौं। होटल हाम्रो आवश्यकता हो। बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको जुन लक्ष्य छ, ती पर्यटक आउँदा हामीलाई अहिले भइरहेका होटलले पुग्दैन।
तर हामीले पर्यटक भनेर कसलाई मान्ने त्यो, महत्वपूर्ण कुरा हो। भारतबाट गाडी चढेर आउने पर्यटकलाई पर्यटक मान्नु हुँदैन। हजार-पाँच सयको होटलमा बसेर, यहाँका सार्वजनिक गाडी चढेर घुम्न जानेलाई पर्यटक मानेर मख्ख पर्‍यौं भने त्यसको अर्थ हुँदैन।
त्यस्तै तीर्थारूका रूपमा दर्शन गर्न आउने छुट्टै कुरा हो। नत्र हामीले भुटानको मोडलमा जानुपर्छ। सरकारले नेपालमा छिरेपछि प्रतिदिन यति डलर खर्च गर्नपर्छ भनेरै तोकिदिनुपर्छ।
हामीले यहाँको पर्यटकीय स्थलको प्रचार गर्नुपर्छ र त्यहाँसम्म जाने बाटोलगायत अन्य बस्ने सुविधा निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रा पर्यटकीय स्थलमा हामीले पर्यटक घुमाउन सकेकै छैनौं। त्यो वातावरण सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले तयार गर्नुपर्छ।
अब यसमा भावी योजना के छन्? सुविधाहरू के थप्ने?
हाम्रो होटलमा अहिले क्यासिनोबाहेक सबै सुविधा छन्। आगामी दिनमा नजिकै जग्गा लिएर क्यासिनो पनि खोल्ने योजना छ।
अहिले धमाधम होटल खुलिरहेका छन्। नेपालमा होटल सञ्चालन गर्न सजिलो छ?
कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुँदैन। एउटा घर बनाउन त कति झन्झट बेर्होन पर्छ। होटलको कुरा गर्ने हो भने निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मै समस्या छ।
साना होटल त आन्तरिक पर्यटकले पनि चल्छन् तर ठूला पाँचतारे होटल चलाउन विदेशी नै चाहिन्छ, जुन चुनौती छ।
फेरि हामीकहाँ त्यस्ता निर्माण कम्पनी नै छैनन् जसले होटल तयार गरेर देओस्। यहाँका कम्पनीले होटलको भवन मात्र निर्माण गर्न सक्छन्, भित्री डिजाइनका लागि विदेशी नै ल्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो लागत पनि धेरै हुन्छ र निर्माण पनि समयमा गर्न सक्दैनौं।
त्यस्ता कम्पनी यहीँ खुल्न सके निर्माण लागत पनि कम र छिटो पनि हुन्छ।
हेर्नुहोस् ह्यात प्लेस होटलका तस्बिरहरू।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, ०३:४०:००